Pyae Phyo (MMiTD): ♪ " Huawei P8 Lite (2017) VS Huawei P9 Lite Mini " တို့ နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင် ♫
♪ " Huawei P8 Lite (2017) VS Huawei P9 Lite Mini " တို့ နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင် ♫
ဒီတစ်ပတ်တော့ Huawei ကနေ တစ်နှစ်တည်းမှာပဲ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Huawei P9 Lite Mini နဲ့ Hauwei P8 Lite (2017) တို့ရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကွဲခြားချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်း2လုံး မှာ တူညီတာတွေ မရှိသလောက်နည်းပါးပြီး အကုန်လုံးနီးပါးက ကွဲပြားမှုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ တူညီလုနီးပါးရှိပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ တည်ဆောက်ပုံကလည်း မတူညီသလို စက်စွမ်းဆောင်ရည်၊ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး၊ ကင်မရာစွမ်းအားနဲ့ ဘက်ထရီစွမ်းရည်တွေအားလုံးကလည်း ကွာခြားပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းတွေကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖုန်း2ခုလုံးမှာ Dual Nano SIM စနစ်တွေပါရှိလို့ Nano SIM card2ကတ်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ Fingerprint Sensor ခြင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ Huawei P8 Lite (2017) မှာ Emotion 5.0 UI ကို သုံးထားပြီး P9 Lite Mini မှာတော့ 5.1 UI ကို သုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
1. Huawei P8 Lite (2017)
Huawei P8 Lite (2017) ရဲ့ အရွယ်အစားက 147.2 x 72.9 x 7.6 mm ဖြစ်ပြီး 147g လေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါးလွှာပေါ့ပါးမှုကတော့ ကိုင် တွယ်သုံးစွဲရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ၎င်းကို အမည်းရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ရွှေရောင်နဲ့ အပြာရောင်ဆိုတဲ့ အရောင်4မျိုးရွေးနိုင်မှာပါ။
2. Huawei P9 Lite Mini
Huawei P9 Lite Mini ရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ 143.5 x 71 x 8.1 mm ရှိပြီး 145g အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် P8 Lite ထက် ပိုထူပေမယ့် အနည်းငယ် ပိုပေါ့ပါးပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အမည်းရောင်၊ ရွှေရောင်နဲ့ ငွေရောင်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Huawei P8 Lite (2017) ရဲ့ စက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက် RAM 3GB/4GB ပါရှိတဲ့ Hi-Silicon Kirin 655 Octa-core (4x2.1GHz Cortex-A53 & 4x1.7GHz Cortex-A53) processor နဲ့ Mali-T830MP2 GPU တို့ကို ပံ့ပိုး ပေးထားပါတယ်။
P9 Lite Mini မှာတော့ Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Chipset, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Processor နဲ့ Adreno 308 Graphics Card တို့ကို သုံးထားပြီး ယာယီမှတ်ဉာဏ်စွမ်းအား RAM စွမ်းအားပိုင်းမှာ တော့ 2GB သာ ပါရှိပါတယ်။
မျက်နှာပြင်အကျယ် 5.2-inch ရှိပြီး IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Display အမျိုးအစားကို သုံးစွဲထားပါတယ်။ ပြသပေးနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းစွမ်းအားက 1080 x 1920 pixels ရှိပြီး ၁ လက်မ သိပ်သည်းဆက ~424 ppi pixels ပမာဏတောင် ရှိပါတယ်။
မျက်နှာပြင် အမျိုးအစားချင်းတော့ တူညီပေမယ့် ပြသနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းစွမ်းအားက 720 x 1280 pixels သာရှိပြီး မျက်နှာပြင်ကလည်း5လက်မအကျယ်ရှိတာမို့ မျက်နှာပြင်အကျယ်နဲ့ မြင်ကွင်းစွမ်းအားမှာ အနည်းငယ် ပိုနိမ့်ပါတယ်။
Huawei P8 Lite (2017) ဟာ အားလုံးယှဉ်ကြည့်ရင် Huawei P9 Lite Mini ထက် နေရာတော်တော်များများမှာ ပိုမိုအားသာတာကို တွေ့ရပြီး ဘက်ထရီစွမ်းအားမှာတော့ မဆိုသလောက်လေး ပိုနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ထိုက်တန်မှုလည်းရှိတဲ့ အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei P9 Lite Mini ကတော့ P8 Lite ထက် ဘက်ထရီစွမ်းအားမှာ 20mAh လောက် ပိုမိုသာပြီး ကျန်တာတွေမှာတော့ အနည်းငယ်လေး အားနည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်မှထွက်ထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်း ပုံစံချင်းလည်း ကွာခြားတာမို့ P9 Lite Mini ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။